ADEEGA OEM - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Shaxda Socodka Dalabka
Waxaan ku siin alaabta leh technology processing kaamil ah, heer farsamo sareeyo, macnaha imtixaanka dhamaystiran, heerka sare iyo tayada sare.
Hal-abuurka tignoolajiyada wax soo saarka, hal-abuurka adeegga tayada sare leh, si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha, iyo in loo xalliyo dhibaatooyinka isticmaalayaasha tignoolajiyada iyo iibinta ka dib.
Haddii aad raadinayso transformer gaar ah, fadlan nala soo xiriir!
Si loo siiyo ciyaar buuxda faa'iidooyinka kheyraadka ee shirkadaha labada dhinac, iyadoo la raacayo mabda'a faa'iidada wadaagga ah, guul-guuleysiga iyo horumarka guud, labada dhinac waxay gaareen shuruudaha soo socda ee wax soo saarka OEM:
1. In labada dhinac isweydaarsadaan agabka amaahda ganacsigu waa in uu noqdaa mid sax ah oo wax ku ool ah, haddii kale khasaaraha ka dhashay waxa qaadi doona cidda jabisay.
2. Siyaabaha iskaashiga
1. Xisbiga B waxa uu u wakiishay in uu soo saaro transformers iyo alaabooyin kale oo leh magaca shirkadda, ciwaanka iyo astaanta astaanta xisbiga A. Xisbiga B waxa uu dammaanad qaadayaa in badeecada la soo saaray aanay ku xad-gudbin cid saddexaad oo xuquuqdeeda hantideeda aqooneed iyo xuquuqdeeda iyo danaha sharciga ah.
2. Xisbiga B waxa uu dammaanad qaadayaa in tilmaamayaasha alaabooyinka la soo saaray ay u hoggaansamaan heerarka wax soo saarka ee macaamiisha iyo shuruudaha la xidhiidha heerarka qaranka, iyo in alaabooyinka la bixiyay ay waafaqsan yihiin shuruudaha ilaalinta deegaanka ee habboon.
3. Badeecadaha OEM waxa gabi ahaanba iibiya xisbiga A. Xisbiga B kama masuul aha iibinta.Xisbiga B waa in aanu ka iibinayn alaabta OEM ee xisbiga A u wakiishay cid kale.
4. Ka dib marka uu dhaco ama joojiyo wada shaqaynta, xisbiga B waa in aanu dib u soo saarin ama iibin karin alaabta leh astaanta xisbiga A nooc kasta ha ahaatee.
5. Xisbiga A waxa uu xaq u leeyahay in uu u diro shaqaale ilaalinaya alaabta ceeriin, qalabyada, habka oo dhan ee wax soo saarka, tayada alaabta, iwm. ee alaabta OEM.Xisbiga B wuxuu la shaqeeyaa oo ku caawiyaa dhammaan dadaallada.
3. Meesha, qaabka iyo qiimaha gaarsiinta (keenista)
1. Waxaa lagu go’aamiyaa labada dhinac wada tashi.
2. Kharashyada baakadaha alaabta iyo samaynta saxanadda waa in ay ka wada xaajoodaan labada dhinac.
4. Baakadaha alaabta iyo shuruudaha ilaalinta
1. Xisbiga A waa inuu bixiyaa naqshadaynta naqshadaynta baakadaha, sanduuqyada midabka, tilmaamaha, calaamadaha, taarikada, shahaadooyinka waafaqsanaanta, kaadhadhka dammaanadda, iwm. muunado.
2. Ka dib marka uu dhaco ama joojiyo wada shaqaynta labada dhinac, xisbiga B waa in aanu xaq u lahayn isticmaalka ama soo saarida wax soo saar leh astaanta xisbiga A sinaba.
5. Maareynta astaanta
1. Lahaanshaha calaamada ganacsiga ee uu bixiyay xisbiga A (ay ku jiraan naqshadaynta baakadaha, sawirada, xarfaha Shiinaha, Ingiriisiga iyo isku darka, iwm.) waxaa iska leh xisbiga A. Xisbiga B waa in uu isticmaalo calaamada ku dhex jirta baaxadda uu fasaxay xisbiga A mana aha in aanu ku wareejiso ama balaadhiso baaxadda isticmaalkeeda ogolaansho la'aan.
1. Muddada iibka ka dib iyo muddada dammaanadda waxaa ka wada xaajoon doona labada dhinac.
2. Xisbiga B wuxuu si adag u fuliyaa waajibaadka khuseeya ee ku qeexan sharciga tayada badeecada ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha.Xisbiga B waa in uu ku dadaalaa sidii uu u xalin lahaa mushkiladaha soo celinta iyo kala beddelashada badeecadaha ee ay sababeen dhibaatooyinka tayada ee xisbiga B, kharashaadka la xidhiidhana waxa bixinaya xisbiga B;Xisbiga A ayaa mas'uul ka ah kharashyada la xiriira ee ka dhashay waxyeelada alaabta ay sababtay isticmaalka aan caadiga ahayn.